एथलेटिक्समा ऐतिहासिक स्वर्णसहित नेपाललाई १३ औँ सागको दोस्रो दिन आठ स्वर्ण (सूचीसहित) « Naya Page
एथलेटिक्समा ऐतिहासिक स्वर्णसहित नेपाललाई १३ औँ सागको दोस्रो दिन आठ स्वर्ण (सूचीसहित)
प्रकाशित मिति : December 3, 2019
काठमाडौं, १७ मंसिर । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को दोस्रो दिन नेपालले एथलेटिक्समा ऐतिहासिक स्वर्ण सहित आठ स्वर्ण जितेको छ । आज(मंगलबार) आठ स्वर्ण जितेसँगै नेपालले २३ स्वर्ण जित्दै शीर्ष स्थामै छ ।
मंगलबार नेपालले कराते, तेक्वान्दो, उसुमा समान दुई–दुई र दुआथलनमा एथलेटिक्समा समान एक–एक स्वर्ण जिते । सोमबार नेपालले कराँतेमा सात, तेक्वान्दोमा सात र ट्रायलथनमा १ गरी १५ स्वर्ण जितेको थियो ।
नेपालले २३ स्वर्ण, ९ रजत, १२ कास्य गरि जम्मा ४४ पदक जितेको छ । भने भारत १२ स्वर्ण, १२ रजत र ९ कास्य सहित दोस्रो स्थानमा छ ।
मनिषाको एथलेटिक्समा ऐतिहासिक स्वर्ण
नेपालले सागमा एथलेटिक्स महिलाहरूको १० हजार मिटर दौडमा सन्तोषी श्रेष्ठले पहिलो पल्ट नेपाललाई स्वर्ण दिलाइन् । उनले भारतकी कविता यादवभन्दा मिलि सेकेन्डले मात्रै अगाडि रहेकी थिइन् । उनले ३५ मिनेट ७.९४ सेकेन्डमा दौड पूरा गरिन् । नेपाली महिला एथलेटिक्समा सागमा यसअघि नेपालको यस विधामा उत्कृष्ट प्रदर्शन कान्छीमाया कोजुले सन् २००६ को श्रीलङ्का सागमा जितेको रजत पदक थियो ।
उसुको दुई स्वर्ण
आज (मंगलबार)बाट सुरु भएको उसुमा नेपालले दुई स्वर्ण जितेको छ । नेपालले उसुको थाउलो अन्तर्गत पुरुष र महिला छानछ्वानमामा स्वर्ण जितेको हो । महिलामा सुस्मिता तामाङले स्वर्ण जितिन् भने पुरुषमा विजय सिञ्जालीले थाउलोतर्फ छानछ्वानमा स्वर्ण जितेका हुन् ।
करातेमा समान दुई–दुई स्वर्ण, रजत र कास्य
नेपालले मंगलबार कराँतेमा समान दुई–दुई स्वर्ण, रजत र कास्या जितेको छ । नेपालका लागि ६७ केजी तौल समूहमा नबिन रसाइली र ६८ केजी तौल समूहमा सुनिता महर्जनले स्वर्ण जिते ।
यसैगरी अनु गुरूङ र कुशवाहले रजत पदक जिते भने राजिव पुडासैनी र मनिषा चौधरीले कास्य पदक जितेका छन् ।
करातेमा पदक जित्ने खेलाडी ।
तेक्वान्दोमा थप दुई स्वर्ण, एक-एक रजत र कास्य
तेक्वान्दोमा नेपालले मंगलबार दुई स्वर्ण, एक रजत र एक कास्य जितेको छ । सातदोबाटोस्थित तेक्वान्दो हलमा आज( मंगलबार) भएको चार स्वर्णको लागि भएको प्रतिष्पर्धा नेपालको वीरबहादुर महरा र काजल श्रेष्ठले स्वर्ण जिते । तेक्वान्दोको ग्यारोगीतर्फ वीरबहादुर महराले पुरुष ६८ केजीमुनिको तौल समूहमा र काजल श्रेष्ठले ग्यारोगीतर्फ महिला ४६ केजीमुनि तौल समूहमा स्वर्ण पदक जितेका हुन् ।
यसैगरी ५७ केजी मुनीको तौल समुहमा निमा गुरुङले रजत पदक र पुरुष ५४ केजी मुनीको तौल समुहमा मनोज मल्लले कास्य पदक जिते ।
ट्रायथोलन एक स्वर्ण
पोखरामा सम्पन्न स्प्रिन्ट विधाको डुवाथोलन प्रतिस्पर्धामा नेपालले पुरुषतर्फ एक स्वर्ण र एक रजत पदक जितेको छ । त्यसैगरी डुवाथोलनको महिलातर्फ नेपाल एक रजत पदक जित्न सफल भयो ।
टमाटाले पाँच किमी दौड, २० किमी साइकल र पुनः दुई दशमलव पाँच किमी दौड ५७ मिनेट ३३ सेकेण्डमा पूरा स्वर्ण पदक दिलाए। नेपालकै लक्ष्मण मल्लले निर्धारित दूरी ५९ मिनेट १३ सेकेण्डमा पूरा गरी रजत जित्न सफल भए । नेपालका भूमि बुढामगरले रजत पदक जित्न सफल भइन् ।
ट्रायथोलनमा पाँच स्वर्ण, पाँच रजत र पाँच काश्य गरी १५ पदकका लागि प्रस्पिर्धा भइरहेको छ । ट्रायथोलनमा सोमबार भएको प्रतिस्पर्धामा महिलातर्फ नेपाल तथा पुरुषतर्फ भारतले स्वर्ण पदक जितिसकेको छ ।
नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको पदक
१०.तेक्वान्दो पुम्से (२३–२९ वर्ष ) – कमल श्रेष्ठ
११.तेक्वान्दो पुम्से ( १७ –२३ वर्ष )– सिना मादेन लिम्बु
१२.तेक्वान्दो पुम्से (२३ –२९ वर्ष ) – पार्वती गुरुङ
१३.तेक्वान्दो पुम्से (२९ वर्ष माथि ) – आयशा शाक्य
१४.तेक्वान्दो पुम्से (२९ वर्ष माथि )( आयशा शाक्य र सञ्जिकुमार पाण्डे
१५.पुम्से महिला टिम (१७–२३ वर्ष) – निशा दर्नाल, स्वस्तिका तामाङ र सन्जिला तिमल्सिना
१६.पुम्से महिला टिम (२३–२९ वर्ष) – निता गुरुङ, प्रशंसा क्षेत्री र शुसिला राई
१७. तेक्वान्दो (४६ केजी मुनि)– काजल श्रेष्ठ
१८. तेक्वान्दो (६८ केजी मुनि) – वीरबहादुर महरा
१९.ट्रायथलन – सोनी गुरुङ
२०.डुवाथोलन – हिमाल टमाटा
२१. उसु (थाउलो) – विजय सिन्जाली
२२. उसु (थाउलो) – सुस्मिता तामाङ
२३.एथलेटिक्स (१० हजार मिटर)– सन्तोषी श्रेष्ठ
५.डुवाथोलन – लक्ष्मण मल्ल
६. डुवाथोलन – हुमी बुढा मगर
७. महिला भलिबल
साफ उपविजेता खेलाडीलाई सरकारले जनही पाँच लाख रुपैयाँ दिने